Qiimaha farshaxanka birta ahama ee farshaxanka dadweynaha
Laga soo bilaabo geedi socodka horumarka, farshaxanka guud waxaa loo soo saaray laguna horumariyey iyadoo lagu saleynayo horumarka joogtada ah ee bulshada aadanaha, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Isbadalada jawiga bulshada ee hada jira iyo asalka dhaqanka, baaxada fanka dadweynaha ayaa sidoo kale isbadal lagu sameeyay. Ilaa iyo inta ...
Sawir gacmeed noocee ah ayaan u baahanahay?
Shaqada farshaxanka ee goobaha dadweynaha ee magaalooyinka, farshaxan weyn oo baaxad weyn ayaa qayb ka ah jawiga magaalada, ka tarjumeysa dhadhanka dhaqanka magaalooyinka, iyo astaan ​​muhiim u ah ruuxa magaalooyinka. Iyada oo si joogto ah loo hagaajinayo fahamka dadka iyo baahida loo qabo dhaqanka magaalooyinka iyo baararka ...
Noocyada iyo qaababka farshaxanka
Naqshadeynta guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba nooc: farshaxan iyo gargaar. 1. Naqshadeynta waxa loogu yeero farshaxanno wareegsan waxaa loola jeedaa farshaxan saddex-geesood ah oo looga mahadcelin karo jihooyin iyo xaglo badan. Waxa kale oo jira farsamooyin iyo qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa macquul ah iyo kuwa qurxinta, co ...